Rabshado ka dhacay Rosengård | Somaliska
Rabshado ayaa ka dhacay habeenkii labaad xaafada Rosengård ee magaalada Malmö taasoo ay u ku badanyihiin Soomaalida. Dadka rabshada sameynayay ayaa dhagaxaan ku tuurayay gaadiidka dabdamiska iyo booliska ayagoo markii dambe lagu guuleystay in la xakameeyo. Dadkaan rabshada sameynayay ayaa sidoo kale weeraro ku qaaday gaadiidka iyo dadka goobaha marayay balse cidna wax kuma gaarin rabshadaha. Ma ahan markii ugu horeysay ee Rabshado ay ka dhacaan Rosengård. Mana ahan markii ugu horeysay ee xaafad ay soo galootiga u badanyihiin ay dhibaatooyinka dhacaan ayadoo xaafada Rinkeby ee Stockholm ay rabshado foolxun ka dheceen sanadkii la soo dhaafay ayadoo iskuul dab la qabadsiiyay. Xigasho: Sveriges Radio
Rabshado ayaa ka dhacay habeenkii labaad xaafada Rosengård ee magaalada Malmö taasoo ay u ku badanyihiin Soomaalida. Dadka rabshada sameynayay ayaa dhagaxaan ku tuurayay gaadiidka dabdamiska iyo booliska ayagoo markii dambe lagu guuleystay in la xakameeyo.
Dadkaan rabshada sameynayay ayaa sidoo kale weeraro ku qaaday gaadiidka iyo dadka goobaha marayay balse cidna wax kuma gaarin rabshadaha.
Ma ahan markii ugu horeysay ee Rabshado ay ka dhacaan Rosengård. Mana ahan markii ugu horeysay ee xaafad ay soo galootiga u badanyihiin ay dhibaatooyinka dhacaan ayadoo xaafada Rinkeby ee Stockholm ay rabshado foolxun ka dheceen sanadkii la soo dhaafay ayadoo iskuul dab la qabadsiiyay.